Posted by တန်ခူး at 12:03 AM
ha..hah.. kyoe sar.. shar tal.. keep on blogging until the sun rising up..
အားရို့.. ကောင်းလိုက်တာ.. ဖတ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ပါမျောသွားတယ်။း)
"မောင်"ဆိုတာကို သနားလိုက်တာ.. ဒါပေမယ့် သူလည်း အချစ်တော့ကြီးရှာသား ဟိဟိ..
"ကျွန်မ"ဆိုတဲ့ဘက်ကတော့ သိပ်ထွေထွေထူးထူးကွဲပြားစွာ မခံစားမိပါဘူး။ အန်တီတန်ခူးဇာတ်ကောင်အတိုင်းပဲ တွေးမိတယ်
သူ့ဘက်ကမှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်လေ။ မိန်းကလေးပေကိုး..း)
မိန်းကလေးက မောင့်ကိုပြောတဲ့ စကားတွေက ကောင်းလိုက်တာ...ရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တယ် အဟဲ
လာဖတ်သွားပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုလေးနဲ့ပတ်သတ်လို့တော့ လူငယ်တွေပြောကြပါစေလေ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ ရသစာနုလေးတွေ ဆက်လက်ဖန်တီးနိုင်ပါစေ။ အားပေးနေပါတယ်ဗျာ။
မတန်ခူးရေ ၀တ္ထုထဲက မောင်ဟာ အပြင်က မောင် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေး လာဖတ်ချင်လို့ ချန်ထားတာ။ ခုမှ တခေါက်လာဖတ်ရတယ် အမတန်ခူး။ အရင်တုန်းက ရေးခဲ့တာလည်း ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ အမရယ်။ ထားသင့်တဲ့မာနထားတဲ့ မိန်းကလေးကို သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် သူခွင့်လွှတ်ဖို့ စောင့်နေတာဆိုတာကိုလည်း ကြိုက်မိတယ် အမ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇နှစ်က ၀တ္ထုပေမယ့် အစ်မထင်သလို ကလေးမဆန်ပါဘူး...။ ဖတ်ကောင်းတယ်..။
သုခိတာဆေးပေါ့လိပ် ဆိုတာလည်း ခုနောက်ပိုင်းမှာ
ကြော်ငြာမှာရော၊ အပြင်မှာရော မတွေ့ရတော့ဘူးနော်..။
ရင်ခုန်ပွင့်နဲ့ ပန်းဝေသီမှာ ၀တ္ထုတိုတွေချည်းမို့
အားကောင်းတဲ့ ၀တ္ထုလေး တစ်ပုဒ်ပဲ မတန်ခူး။
ရေးထားတဲ့ စာလုံးလေးတွေ တလုံးစီကိုက ကလေးဆန်တဲ့ လက်ရာ မဟုတ်မှန်း ပြောပြနေပါတယ်။
အဲဒီ ၀တ္ထုထဲက မိန်းကလေးကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ..:)
နောက်ဆုံး မှတ်ချက်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမယ်..။း)
အင်း..အားလုံးပဲ ဒီလို အချိန်မှာ ဒီလို လေးတွေ..ရေးခဲ့ဘူး ကြတယ်နော်...။ရင်ခုန်ပွင့်က..ကာဗာ သရုပ်ဖော်ပုံလေး တော့ ဘာလုပ်မထဲ့တာလဲ..ကလောင်နံမယ် သိသွားမှာ စိုးလို့လား မတန်ခူးရဲ့။း)
မတန်ခူးရေ.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်က ဆိုပေမယ့် ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ်.. မိန်းကလေးတိုင်းကိုလည်း ဝေနုလို စိတ်မျိုးတွေ ထားစေချင်တယ.်. :)
ကောင်းတယ် တန်ခူးရေ..အဲလိုမိန်းကလေးမျိုးကို သဘောကျတာ...ချစ်တတ်သော နုးညံ့သလောက် ပြတ်သားသော..။ စာထဲကမောင်နဲ့ တန်ခူးမောင် မတူဘူးလို့ လာမယ့်အတွေးတွေ ကြိုပိတ်ထားတာကိုတော့ ပြုံးသွားပါတယ်..။
နောက်ထပ် တန်ခူးဆီမှာ ရှိသေးရင်လည်း တင်ပေးပါဦးနော်..
၀တ္ထုလေးက ကလေးမဆန်ပါဘူး တန်ခူးရဲ့ ..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ စိတ်ကလေးကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးပြထားတာ...
မြန်မာမိန်းကလေးတွေအများစုက သနားတာ အားနာတာက “ မောင်” လိုလူတွေအတွက် နင်းယူတတ်တဲ့ အားပျော့တဲ့ အကွက်တွေ ဖြစ်နေတတ်လို့ ပါ...။
KKရေ… ကျွန်မက မိခင်တယောက်ဖြစ်လို့သားလေးအိပ်ချိန်မှ ဘလော့ခွင့်ရတာပါ… ကျေးဇူးပါ…
မီယာရေ… ဟုတ်တယ်နော်… ရုပ်ရှင်နဲနဲဆန်သွားသလိုပဲ…
ကိုဝေလင်းရေ… ကျေးဇူးပါ… ကျွန်မကတော့ စိတ်ကူးတေးသီဆီ အမြဲရောက်ဖြစ်နေပါတယ်…
ပုံရိပ်ရေ… အဲဒီလိုမောင်မျိုး လက်မတွဲရဲပါကွယ်…
မဇနိရေ… အားပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရယ်…
ဟုတ်တယ်နော်… သုခိတာဆေးလိပ်က အဲဒီအချိန်တုန်းက အတော်ဟော့လိုက်တာ… ခုတော့ မတွေ့ ရတော့ဘူးနော်… sin dan lar ပြောမှ အမသတိထားမိတယ်…
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါပန်ရေ… အဲဒီတုန်းက ငယ်သေးတော့ ရေးချင်တယ်ဆို ဘာမှ သိပ်မစဉ်းစား ချရေးလိုက်တာ…
ချိူသင်းရေ… အဲဒီဝတ္ထုထဲက မိန်းခလေးက တယောက်ထဲ ဟုတ်ဘူးနော်… မိန်းခလေးတွေ ကိုယ်စား…
ကေရေ… ဘယ်လိုလုပ်သိ… ပထမကာဗာထည့်မလို့ စဉ်းစားသေးတယ်… ကလောင်နာမည်ကို ဖုန်းပြီးတော့လေ… နောက်တော့… တယောက်ယောက်ဆီမှာ ဒီစာအုပ်လေးရှိနေရင်လို့ တွေးမိသွားတာ…
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် နုရေ…
ဟုတ်ကဲ့ပါ မ ရေ… တင်ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်… ရိုက်ရတာတော့ အပျင်းသား… ဟိဟိ…
သက်ဝေရေ… ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ….
ဟုတ်ပါတယ် TNS ရေ… အားနာလွန်ရင် ဘ၀နဲ့ ပါ ရင်းတတ်ကြရတယ်နော်… အင်း… ခေတ်တွေ ပြောင်းလာတာတော့ အမှန်ပဲ… ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဖြစ်ပါစေလို့ ပဲ… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ပါဦးနော်…